လူကြီးမိဘတွေအပေါ် လိမ္မာရိုကျိုးသလို ပညာရေးမှာလဲထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ သမီးလေး စစ်လွန်းအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ စိုင်းလွှမ်း – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ စိုင်းလွှမ်းအနုပညာလောကမှာ ထိုက်သင့်သလောက်ပရိသတ်တွေသိရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အခုချိန်မှာSingleFatherအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော် သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ကိုစောင့်ရှောက်ကာ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေသူပါ။ဒီ​နေ့မှာတော့” REPORT CARD ကိုရတော့ ပါပါးစိတ်ပူနေတဲ့ဘာသာ မီ;မီး(အမှတ်၁၀၀)ရအောင်ဖြေနိုင်တယ် နော်တဲ့ …စိတ်မပူစေချင်တာ သိပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထားလို့ မြန်မာ စာ မြန်မာစကားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ဖြစ်မှာ ကိုစိတ်ပူမိတော့ ခဏခဏ ပြောဖြစ်တယ် လမ်းသွားလည်း မြင်သမျှဆိုင်းဘုတ်ကစာတွေလိုက်ဖတ်ခိုင်းတာတွေလုပ်သည် ထိစိတ်ပူခဲ့တယ်။
သမီးရဲ့ အနီးကပ်အဖွားဆရာမကိုချစ်ကြောက်ရိုသေ ကြောင့်လည်း ပါတယ် 😁(ကျနော်တို့ညီက်ိုတွေလည်း ငယ်တုန်းက သမီးလိုပဲ စာမေပွဲ ဖြေဖို့သွားခါနီးကို အစောကြီးထပြီး အိမ်မှာ တစ်ခါအရင်ဖြေရတာ 😖😅 )ချီးကျူးခံလို့လဲ ပြီးရော ခြံထဲဆင်းအသီးတက်ခူးတာ ပြုတ်ကျပြီးခြေထောက်ခေါက်သွားတဲ့ သူ့ပါပါးကို %%% အဲ့ဒါတွေပေါ့ စိတ်ပူနေရတာ ပါးရယ် …🥺ကနေစပြီး ဆူလိုက်တာ စုံလို့ သူကအကြောတောင်ပြင်ပေး လိုက်သေးတယ် ​။
သူyoutubeကနေ ကြည့်ထားတာ တဲ့😅ဟုတ်သလိုပဲ အကြောတော့ပြန်ပေါ်လာပြီးသက်သာလာတာပဲ အဆူတော့ခံလိုက်ရတယ် 😁 ဒီလိုလေး မြင်ရဖို့ ဖြစ်ဖို့ အသိတရားဘာသာတရားကိုယ်ချင်စာတရား ရှိဖို့ သိဖို့ကြိုစားပြောပြဆုံးမပေးခဲ့သမျှ ၁၀နှစ်နီးပါးဆိုတဲ့ အချိန်ကာလက ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းမသိအောင် ပါပဲ ဒါပေမဲ့ အခု Report Card ကိုကြည့်ပြီး အောက်မှာရေးထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ့ comment လေးကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပီတိဖြစ်ရတာက တော့ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါမြန်မာစာမြန်မာစကားအတွက် သမီးကို စိတ်မပူတော့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သမီးလေးရဲ့သိတတ်လိမ္မာမှုတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ဖခင်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ စစ်လွန်းလေးကို ချစ်ရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ပရိသတျကွီးရေ စိုငျးလှမျးအနုပညာလောကမှာ ထိုကျသငျ့သလောကျပရိသတျတှသေိရှိထားတဲ့သူတဈယောကျပါ။သူ့ရဲ့အိမျထောငျရေးကတော့ အခုခြိနျမှာSingleFatherအနနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့အခဈြတျော သမီးလေး စဈလှနျးဝတီထကျကိုစောငျ့ရှောကျကာ ဘဝကိုအေးခမျြးစှာဖွတျသနျးနသေူပါ။ဒီ​နမှေ့ာတော့” REPORT CARD ကိုရတော့ ပါပါးစိတျပူနတေဲ့ဘာသာ မီ;မီး(အမှတျ၁၀၀)ရအောငျဖွနေိုငျတယျ နျောတဲ့ …စိတျမပူစခေငျြတာ သိပမေဲ့ အင်ျဂလိပျကြောငျးထားလို့ မွနျမာ စာ မွနျမာစကားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ဖွဈမှာ ကိုစိတျပူမိတော့ ခဏခဏ ပွောဖွဈတယျ လမျးသှားလညျး မွငျသမြှဆိုငျးဘုတျကစာတှလေိုကျဖတျခိုငျးတာတှလေုပျသညျ ထိစိတျပူခဲ့တယျ။
သမီးရဲ့ အနီးကပျအဖှားဆရာမကိုခဈြကွောကျရိုသေ ကွောငျ့လညျး ပါတယျ 😁(ကနြျောတို့ညီကျိုတှလေညျး ငယျတုနျးက သမီးလိုပဲ စာမပှေဲ ဖွဖေို့သှားခါနီးကို အစောကွီးထပွီး အိမျမှာ တဈခါအရငျဖွရေတာ 😖😅 )ခြီးကြူးခံလို့လဲ ပွီးရော ခွံထဲဆငျးအသီးတကျခူးတာ ပွုတျကပြွီးခွထေောကျ ခေါကျသှားတဲ့ သူ့ပါပါးကို %%% အဲ့ဒါတှပေေါ့ စိတျပူနရေတာ ပါးရယျ …🥺ကနစေပွီး ဆူလိုကျတာ စုံလို့ သူကအကွောတောငျပွငျပေးလိုကျသေးတယျ ​။
သူyoutubeကနေ ကွညျ့ထားတာ တဲ့😅ဟုတျသလိုပဲ အကွောတော့ပွနျပျေါလာပွီးသကျသာလာတာပဲ အဆူတော့ခံလိုကျရတယျ 😁 ဒီလိုလေး မွငျရဖို့ ဖွဈဖို့ အသိတရားဘာသာတရားကိုယျခငျြစာတရား ရှိဖို့ သိဖို့ကွိုစားပွောပွဆုံးမပေးခဲ့သမြှ ၁ဝနှဈနီးပါးဆိုတဲ့ အခြိနျကာ လက ဘယျလို ကုနျသှားမှနျးမသိအောငျ ပါပဲ ဒါပမေဲ့ အခု Report Card ကိုကွညျ့ပွီး အောကျမှာရေးထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ့ comment လေးကို ဖတျကွညျ့တဲ့အခါ ပီတိဖွဈရတာက တော့ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါမွနျမာစာမွနျမာစကားအတှကျ သမီးကို စိတျမပူတော့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သမီးလေးရဲ့သိတတျလိမ်မာမှုတှကေိုပွောပွခဲ့တာပါ။ပရိသတျတှလေညျး ဖခငျရဲ့သှနျသငျဆုံးမမှုတှနေဲ့ ယဉျကြေးလိမ်မာစှာ ကွီးပွငျးလာတဲ့ စဈလှနျးလေးကို ခဈြရငျမှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။